‘सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउँछौं’
अन्तर्वार्ता/विचारआइतबार, २० फाल्गुण , २०७४
नयाँ व्यवस्थापनका साथ उत्पादन शुरु गरेको नेपाल औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक डा. रोभसकुसुम सुवेदी भन्छन्, “जनतालाई सहज र सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएका छौं।”
आखिर, औषधि उत्पादन शुरु भएरै छाड्यो हैन ?
उत्पादन र मूल्यमा सरकारको नियन्त्रण कायम गरी जनतालाई सहज रुपमा औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेर उत्पादन शुरु गरिएको हो । आफ्नै उत्पादन हुँदा महामारी फैलिएको अवस्था र अन्य किसिमका असहज परिस्थितिमा पनि सेवा प्रवाहमा सहज हुन्छ ।
अहिले कुन–कुन औषधि उत्पादन भइरहेको छ ?
२४ वैशाख २०७४ बाट जीवनजल, यही १४ फागुनबाट सिटामोल उत्पादन गर्न थालेका छौं । आवश्यकताका आधारमा अन्य औषधि पनि उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । अरु कुन–कुन औषधि उत्पादन गर्ने भन्ने निधो अर्थ, उद्योग र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा हुन्छ ।
औषधि लिमिटेडले उत्पादन शुरु गरेको सिटामोल बजारमा कहिले आउँछ ?
१० लाख ट्याबलेट उत्पादन गरेपछि मात्र बजारमा पठाउने लक्ष्य छ । त्यस अनुसार, चैतदेखि हाम्रो उत्पादन बजारमा जान्छ ।
निजी क्षेत्रका औषधि कम्पनी नाफामा जाने, सरकारी स्वामित्वको औषधि लिमिटेड चाहिं धरासायी बन्नुको कारण के होला ?
विगतमा आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण बन्द भएको हो । हामी नयाँ संरचनामा आएका छौं । सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने सबै प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।
त्यति औषधि उत्पादन गर्दा पनि हामीलाई काम पुग्छ । अब पुराना घटना दोहोरिंदैनन्, नयाँ ढंगबाट अघि बढ्छौं । सरकारले बजेट उपलब्ध गराए सबै प्रकारका औषधि उत्पादनका लागि सक्षम छौं ।
कम्पनीको समस्या के हो ?
नेपाल औषधि लिमिटेड सरकारी स्वामित्वको निकाय हो । यसले खरीदबिक्रीमा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले उत्पादनमा असर पुग्छ । जसले गर्दा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ । खरीदबिक्रीमा प्रक्रिया पु¥याउनतिर लाग्दा काममा ढिलाइ हुन्छ, नपु¥याउँदा कानूनी समस्या आइलाग्छ ।